မြဝတီမြို့၌ ငွေကျပ်သိန်း ၇ဝဝဝဝ ကျော် အကုန်ခံ၍ ခေတ်မီအဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားစခန်းကြီးကို ၂ဝ၂၁ ခ? - Yangon Media Group
မြဝတီမြို့၌ ငွေကျပ်သိန်း ၇ဝဝဝဝ ကျော် အကုန်ခံ၍ ခေတ်မီအဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားစခန်းကြီးကို ၂ဝ၂၁ ခ?
မြဝတီ၊ မေ ၁၅
မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့တွင် ငွေကျပ်သိန်း ၇ဝဝဝဝ ကျော် အကုန်အကျခံ၍ ခေတ်မီအဝေး ပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းကြီးတစ်ခု ကို ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်အပြီးတည်ဆောက် နေကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါခေတ်မီယာဉ်ရပ်နား စခန်းကြီးအား ”စိမ်းလဲ့မြိုင်”အဝေး ပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းဟုအမည် ပေးထားပြီး မြဝတီမြို့နှင့်သုံးကီလို မီတာအကွာ ‘အေးသုခ’ကျေးရွာ အနီး၌ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကာ မေ ၃ ရက်တွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ် တိုင်ပန္နက်တင် မင်္ဂလာအခမ်းအ နားတက်ရောက်၍ စတင်ဆောက် လုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့ ‘စိမ်းလဲ့မြိုင်’ ခေတ်မီအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နား စခန်းတည်ဆောက်ဖို့ ကရင်ပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို တင်ပြခဲ့ပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့ အတည်ပြု ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆောင်ရွက်တာပါ။ နယ်စပ်မြဝတီမြို့မှာ အဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားစခန်းမရှိတဲ့အတွက် ကားဂိတ်တွေလည်း နေရာစနစ် တကျမရှိတာကြောင့် ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်း နေ့စဉ်နီးပါး ဖြစ်ပေါ်နေသလို ခရီးသွားပြည်သူ တွေလည်း အခက်အခဲဖြစ်ကြရပါ တယ်၊ ဒါကြောင့်ခေတ်မီအဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားစခန်းကြီးတစ်ခုကို ကျပ်သိန်း ၇ဝဝဝဝ ကျော်အကုန်ခံတည်ဆောက်ပြီး ၂ဝ၂၁ ဧပြီလ လောက်မှာပြီးစီးဖို့ ခန်းမှန်းထားပါတယ်၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းကြီးပြီးသွားရင် အိမ်ရာစီမံကိန်းတွေကို ပါတည်ဆောက်သွားမှာပါ” ဟု စိမ်းလဲ့မြိုင်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နား စခန်းတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းမှ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာဦးမျိုးဝင်းသန်းကပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ”စိမ်းလဲ့မြိုင်”ခေတ် မီအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ကြီးတွင် မော်တော်ယာဉ်ကြီးများ အတွက် ၂၅ ပေ၊ ပေ ၄ဝ နှစ်ထပ် ဆောင် ၅၃ ဆောင်၊ ယာဉ်ငယ် များအတွက် ၁၅ ပေ၊ ပေ ၃ဝ နှစ် ထပ်ဆောင် ၅ဝ တည်ဆောက် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်ရပ်နား စခန်း၏ အကျယ်အဝန်းမှာ ကိုး ဧကရှိကြောင်း သိရသည်။
''နိုင်ငံရေးဟာ အာဏာရှင်ဝါဒီဆီ ပြန်သွားနေပါတယ်'' - ဂျော့ခ်ျကလူးနေး
မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ရိဒ်ခေါဒါရ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မြန်မာကွမ်းသီးကို အများဆုံး ဝယ်ယူလျက်ရ
နှစ်စဉ် ကျင်းပမြဲဖြစ်သော World Wood Day အခမ်းအနားကို ယခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် မန္တ??
မာလ်ဒီနီကို နည်းစနစ်ဒါရိုက်တာ ခန့်အပ်လိုဟု ဂါဇီဒစ် ပြောဆို
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့် တရားစီ?
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွက် ဂီတလောကတွင် အနုပညာကြေး အများဆုံးရသည့် အမျိုးသမီးအဖြစ် ကေတီပယ်ရီ သတ်မှတ်ခ??